Umthandazo kuLa Santa Muerte weMali. ? Umsebenzi kwiiyure ezingama-24!
Umthandazo wokufa okungcwele ngemali Inamandla ngokwenyani kwaye esi sisizathu sokuba abantu abaninzi baqhubeke nokujoyina umgca wamakholwa kwaye kukho imimangaliso emininzi le ingcwele ayinikiweyo.
Ukucela imali yinto eqhelekileyo, enokuthi ingaziwa nguwuphi lo mthandazo kwesi sicelo esithile, nangona kungasenziwa nasiphi na isicelo kuwo.
Wonke umntu ophakamisa umthandazo kufuneka enze ngokokholo olusuka entliziyweni, nokuba ungumntu owenza isicelo eso kuba le kuphela kwento efunekayo.
1 Ngaba ukufa okungcwele kuya kundinceda?
2 Umthandazo kuSanta Muerte weMali
3 Uyintoni lo mthandazo?
4 Ndingawenza nini umthandazo ku-Santa Muerte ukutsala imali?
Ngaba ukufa okungcwele kuya kundinceda?
Le Ngcwele inokumnceda wonke umntu osondela kuye ngokukholelwa ukuba le nto ayicelayo inokwenzeka.
Nokuba akunakwenzeka kangakanani na ukubona into ebuzwayo, into ebalulekileyo kukuba uqonde ukuba into eyenziwayo sisenzo esigcwele ukholo kwaye sinyulu ngokomoya kuba umthandazo sisixhobo esinamandla kwaye ngenxa yoko kufuneka sisetyenziswe ngentlonelo enkulu. kunye nobukrelekrele
Umthandazo kuSanta Muerte weMali
Ukufa okuSikelelweyo, ntombazana yam emhlophe inamandla, umhlobo othembekileyo kunye neqabane kwindlela esithembele kuyo ngalo lonke ixesha lobomi bethu obunzima nobunzima, kwaye kuye sonke siya kuba novuyo lokukubona ngosuku lokugqibela lobomi bethu.
Nina niyaziyo imfihlo yentlahla, vumelani ivili ukuba lijike ngokwendalo libheke apho kufanelekileyo khona.
Ndivumele ndibenenxaxheba kumandla akho kwaye ubize kum oko ndikucela kuwe, ithamsanqa, intabalala kunye nokuchuma.
Isibingelelo sakho siya kunikela ubungqina ngembalelwano endiya kuba nayo kuwe, mnini weemfihlakalo ezinkulu zethamsanqa kunye nethamsanqa.
Susa inenekazi elinamandla ngokuphefumla kwakho kwaye liza kusongela kunye nobungozi obudlulile ngaphezulu kwam, ukunqande ububi ukuze ukukhanya okukhanya,
Ndibonelele ngethamsanqa, kwithamsanqa nakwishishini, eli thamsanqa lifike emnyango wam, kwaye ukuba nentabalala nokuchuma kulawule endlwini yam.
Ndiyabulela ngeminikelo kwaye uya kuhlala uthembekile. Enkosi umhlobo othembekileyo kunye neqabane lam elimhlophe, ukufa kwam okungcwele.
(Yenza isicelo sakho apha ngokholo oluninzi.)
Lo ngumthandazo esinokusithemba kunye nokufikelela kuwo Iinjongo zezezimali esizibekileyo.
Ayisiyonto imbi okanye bukhulu kangakanani ubunzima.
Lo mthandazo unamandla kwaye unakho ukunceda ngaphakathi Zonke iimeko zoqoqosho inokwenzeka ebomini.
Uyintoni lo mthandazo?
Imali ibangela inkxalabo kuba ngaphandle kwawo asinawo amandla okuthenga kubalulekile.
Le yile ngumthandazo ingasinceda kakhulu ukuba senzile ishishini elibi ngathi sikwinqanaba apho singazi ngokucacileyo ukuba loluphi utyalomali ekufuneka silwenzile.
Imali iya kubuyela kuthi ngokukhawuleza nangommangaliso, yiyo loo nto lo mthandazo kufuneka wenziwe ngokuphendula.
Ndingawenza nini umthandazo ku-Santa Muerte ukutsala imali?
Wonke umzuzu kufanelekile ukuphakamisa oku kunye nayo yonke eminye imithandazo, into ebalulekileyo kukuba ukwazi ukuba senza ntoni.
Ndiyazi ukuba sisenzo sokholo kwaye ukuba singawufumana lo mmangaliso siwucelayo, kuba ngaphandle kokholo kuyinto enokwenzeka ukuba izicelo zethu zingabi nazo iimpendulo, ukholo luphambili kuyo yonke imithandazo.
Yitsho umthandazo kuSanta Muerte ngemali onokholo oluninzi.
Umthandazo kuSanta Muerte wothando olungenakwenzeka
Imithandazo enamandla kuSanta Muerte yomsebenzi
Umthandazo malunga neSyprian yaseSyria enamandla